Aqalka Cad oo kaarka aqoonsiga ee lagu galo kala laabtay weriyaha CNN Jim Acosta - BBC News Somali
Aqalka Cad oo kaarka aqoonsiga ee lagu galo kala laabtay weriyaha CNN Jim Acosta
Image caption Jim Acosta ayaa muddo shan sano ah ka soo warramayay Aqalka Cad
Aqalka Cad ayaa kaarkalagu galo kala laabtay wakiilka CNN ee Aqalka Cad saacado kaddib markii ay hadallo kulul is dhaafsadeen madaxweyne Donald Trump.
Fadeexadda Ruushka : Aqalka Cad miyuu labo codleynayaa?
Intii ay socdeen su`aalaha weriyeyaasha, ayuu Acosta kula loollamay adeegsiga Trump ee erayga "qabsasho" isagoo kala jeeda qulqulka muhaajiriinta ka imaanaya Ameerikada Dhexe ee galaya Mareykanka. Wuxuu sidoo kale kula loollamay xayeysiinta ka hortagga muhaajiriinta oo loo arkay inay tahay mid takoor ku saleysan.
Markii uu Acosta isku dayay inuu su`aal ka weydiiyo baaritaanka Ruushka ee faragelintii la sheegay inuu ku lahaa ololihii madaxtinnimada sanadkii 2016, ayuu Trump ku celceliyay "intaas ku jooji" isla markaana "makarafoonka dhig".
Gabar ka tirsan shaqaalaha Aqalka Cad ayaa isku dayday inay makarafoonka ak qaaddo weriyaha, kaddibna Acosta ayaa diiday inuu u dhiibo isagoo ku yiri "iga raalli noqo marwo".
Trump ayaa kaddib ka tegay masraxa, kaddib wuu soo laabtay isagoo yiri: "CNN waa inay ceebsataa inaad adiga oo kale uu u shaqeyso. Waxaad tahay qof xun oo xaasid ah." Wuxuu intaas ku daray: "Sida aad ula dhaqantay Sarah Huckerbee [xoghayihiisa warbaahinta] waa si qaab daran," isagoo aan sababta sharrixin.
Weriye kale ayaa difaacay Acosta, isagoo ku sheegay inuu yahay "weriye fiican". Trump ayaa u jawaabay, "hagaag taageere kuuma ihi adiga xitaa," kaddibna waxaa is qabsaday qosolka dadkii goobta joogay.
Xuquuqda Sawirka @Acosta @Acosta
Acosta ayaa CNN u sheegay inuu weydiinayay su`aal uusan Trump jecleysan taas oo sababtay inay hadallo is dhaafdhaafsadaan. Wuxuu beeniyay inuu u gacan qaaday gabadha, isagoo yiri: "Waxaan isku dayay inaan makarafoonka haysto si aan su`aalo u weydiiyo madaxweynaha."
Xuquuqda Sawirka @whca @whca